Puntland oo canbaaraysay Xayiradii la saaray Madaxweyne Shariif. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Puntland oo canbaaraysay Xayiradii la saaray Madaxweyne Shariif.
Puntland oo canbaaraysay Xayiradii la saaray Madaxweyne Shariif.
September 22, 2019 - By: Mohamud Nadif
War-Saxafadeed kasoo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa lagu canbaareeyay xayiradii la saaray Madaxweynihii hore ee DFS Shariif Sheekh Axmed kaas oo maanta u duuli rabay Magaalada Kismaayo ee Xarunta Ku meel gaarka ah Jubaland si uu uga qaybgalo Caleema saarka Madaxweynaha Jubaland.
Puntland waxay tilmaantey in la jebiyay qodob dastuuri ah, dawladuna ay ku tagri fashay awoodihii lagu aaminay ee dadka ka dhaxeeyay si gaar ahna loogu isticmaalayo dano shaqsiyadeed.
Puntland Waxay beesha caalamka iyo Dadka Soomaliyeed iyo inta danaysa arimaha Siyaasada Soomaaliya u sheegtay in talaabooyinka ay dawladu qaadayso ay wax u dhimayaan hanaanka geedi socodka Siyaasada iyo Horumarka Soomaaliya.
Puntland ayaa ah maaamulkii ugu horeeyay ee arinkaan ka hadla. Sidoo kale Muqdisho waxaa shirar uga socdaan Xubno ay ka mid yihiin Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, Xubnaha baarlamaanka ku jira iyo Odayaal dhaqan, waxaana laga arinsanayaa xayiraadii la saaray socdaalkii Madaxweyne Sheekh shariif.